Ukunyamekelwa kweentlanzi zaManzi abandayo ehlotyeni | Ngeentlanzi
Ihlobo Ayichaphazeli thina bantu kuphela, ichaphazela nemfuyo yethu, kubandakanya neentlanzi. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba amanzi e-aquarium ngokucacileyo ayindawo engundoqo yezi zilwanyana, ke kubalulekile ukuba uthathe ingqalelo kwizikhokelo ezithile ukunqanda ukuba, ngeli xesha lonyaka, banokuqala ukubandezeleka kuxinzelelo oluya kuthi lube zizifo.
Inani elincinci le- amanzi abandayo avela kwitanki leentlanzi Kufanele ukuba ibengaphezulu okanye ngaphantsi kwe-100 yeelitha zamanzi, kwaye ingekuba sifuna njalo, okanye ngenxa yethamsanqa, kodwa ngenxa yezizathu zokuphefumla kwamanzi. Kwimeko apho ubungazi, iintlanzi zamanzi abandayo zifuna ioksijini engaphezulu kuneentlanzi zamanzi akweleenjiko, ke ngexesha lokufika kwehlobo, kwaye amaqondo obushushu enyuka, amanzi anokufudumala kancinane, kunye nezilwanyana ezinokuthi ziqale ukufumana imeko yokuxinana. .
Kukuli xesha lishushu apho umthetho ophakamisa ukuba kwisentimitha nganye yentlanzi nganye kukho ilitha enye yamanzi abandayo, kufuneka iguqulwe ibe ziilitha ezimbini ukuya kwezintathu zamanzi abandayo ngeesentimitha ezilwanyana. Ukuba uqala ukuqaphela ukuba iintlanzi zakho zidada kufutshane nomphezulu, ndincoma ukuba uzame ukulinganisa iqondo lobushushu njengoko kushushu kwaye ufuna ioksijini. Ndikwacebisa ukuba ufumane iizikhuseli zomoya ukuze uhambise umphezulu wamanzincedisa ioksijini yayo.
Khumbula ukuba ungaze uyishiye i-aquarium kwezi ndawo apho imitha yelanga inokubetha ngaphambili njengoko beya kutshisa amanzi ngokukhawuleza kunokuba uyidinga. Kukwacetyiswa ukuba uzibeke endaweni iindawo ezingenisa umoya okanye ukongamela izilwanyana kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Amanzi abandayo e-aquarium » Ukukhathalela iintlanzi emanzini abandayo ehlotyeni